नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिका विषयमा नेकपा प्रवक्ता नारायणककााजी श्रेष्ठको भनाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कडा आपत्ति जनाए।
प्रवक्ता एवम प्रचार विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि प्रचार विभाग उपप्रमुख थापा समाजिक सञ्जालमा खरो उत्रिए । भदौ २९ गते पदावधि सम्पन्न भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनःनियुक्ति र स्वयंमसेवक परिचालनका सम्बन्धमा थापा आफ्नै विभाग प्रमुखमाथि खनिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका दुई विषयमा सामाजिक सञ्जालबाटै थापाले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा बसेर पदीय दायित्व ख्याल नगरेको भन्दै आलोचना गरे। प्रवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो सचिवालयले कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट घोषणा गरेका थिए । लगत्तै आइतबार कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्ति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको लेखेका थिए।
‘कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ समेत पाएका प्रधानमन्न्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा सँधै पूर्व माओवादीमाथि खनिन्छन्। जनयुद्ध शब्दप्रति पनि उनकोे असहमति देखिन्छ । आफ्नै अध्यक्ष प्रचण्डदेखि प्रवक्ता नारायणकाजी र हाल गैर बामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय बाबुरामाथि उनले पटकपटक शाब्दिक प्रहार गरेका छन्।
ती दुवै विषयलाई एकमुष्ठ जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार र प्रचार विभाग उपप्रमुख थापाले ‘काम कुरो अर्कोतिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने’ उखान हालेर उडाए।
थापाले प्रवक्तामाथि मात्रै होइन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भनाइमा समेत कडा टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । केही समयअघि पार्टीमा देखिएको विवादका विषयमा समेत उनले अध्यक्ष प्रचण्डमाथि टिप्पणी गरेका थिए । थापाले अध्यक्ष प्रचण्डसहितका चार नेताले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले ती नेतालार्र्ई ग्याङ अफ फोरको संज्ञा दिँदै पार्टी विभाजन र समाप्त पार्ने कसरतमा लागेको आरोप समेत लगाएका थिए।
तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दा माओवादी विभाजन भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै थापाले अहिले धोबीघाट गठबन्धनकै रिहर्सल भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए।
यो मात्रै होइन थापाले यसअघि पनि अध्यक्षको भनाइमा कडा टिप्पणी गरेका थिए।
यसअघि लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा जारी हुँदा समेत थापाले प्रचण्डको भनाइमा टिप्पणी गरेका थिए। उनले अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्ति तथ्यहीन भएको आरोप लगाएका थिए।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा पार्टी निर्णयकै आधारमा सार्वजनिक भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्रिप्रति थापाले यस्तो टिप्पणी गरे। थापाले प्रचण्डको नाम नलिइ उनलाई लक्षित गर्दै फेसबुकमा लेखे, ‘यसरी दिउँसै रात पार्ने तथ्यहीन कुरा गर्नुको साटो बरू आफू प्रधानमन्त्री रहेको बेला पहिल्यै यो नक्सा यसैगरी प्रकाशित गरेर इतिहास रचेको भए हुँदैनथ्यो होला र ?’
प्रचण्डले नेकपाका संस्थापक नेताहरुको स्मृति दिवसको कार्यक्रममा नक्सा प्रकाशनको विषयलाई लिएर कसैलाई दलाल र कसैलाई राष्ट्रवादी भनेर देवत्वकरण भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
निरन्तर पूर्व माओदीमाथि प्रहार
तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेर हाल नेकपा बनेको भए पनि उक्त दलमा स्पष्ट पूर्व दलको छायाँ देखिन्छ । यसमा खरो रुपमा टिप्पणी सूर्य थापाले नै गर्छन्। उनका अधिकांश अभिव्यक्ति तोकेरै वा घुमाउरो पारामा पूर्व माओवादी लक्षित देखिन्छन् । थापाले ‘माओवादी जनयुद्ध’ का सन्दर्भमा पनि भद्दा टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । ‘जनयुद्धको उद्गमस्थल’ रुकमको चौरजहारीमा आयोजित एक आन्तरिक कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा र थापाबीच भनाभन नै भएको थियो ।
थापाले भनेका थिए ‘पार्टीले जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरुको स्मृतिमा श्रद्धाञ्जलीसभा गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, यहाँ हामी आउँदा ‘जनयुद्ध दिवस’ को ब्यानर देख्यौं । पार्टीको निर्णय तलदेखि माथिसम्म एउटै हुनुपर्दैन ? के यहाँ अलग्गै पार्टी छ ?
थापाले चौरजहारी प्रवेश गर्दा टाँगिएका स्वागतद्वारमा ‘जनयुद्ध दिवस’ भनेर लेखिएकोमा समेत आपत्ति जनाए ।
पार्टीको कुन कमिटीबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भयो ? भन्ने प्रश्न गर्दै थापाले विगतप्रति अतिशयोक्तिपूर्ण गर्व गर्नुभन्दा वर्तमान र भविष्यप्रति सोच्न पूर्वमाओवादी पंक्तिलाई सुझाव समेत दिन भ्याए।
जवाफमा जर्नाजन शर्माले ‘केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको मैले हो’ भन्दै सूर्य थापाले यस्ता हर्कत नरोके नराम्रो हुने सार्वजनिक चेतावनी दिए ।
शर्माले भने माओवादी जनयुद्धको उद्गमथलो रुकुमबाट मात्रै ६ सय जनाले परिवर्तनका लागि जीवन गुमाएको भन्दै शहीदको अपमान हुने खालका अभिव्यक्ति सैह्य नहुने चेतावनी दिए ।
शर्माले बाहिर निस्किएर नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याएर मञ्चमा २६ मिनेट बोल्दा अधिकांश समय थापाका अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए ।
शर्मा र थापाबीचको ‘भनाभन’ सुनिरहेका कार्यक्रमका सहभागीहरुले असहज महसुस गरेका थिए ।
थापाले गैर कम्युनिष्ट राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत बारम्बार तारो बनाउने गरेका छन्।
थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर ‘नग्न दासता प्रदर्शन’ गरेको केही समयअघि टिप्पणी गरेका थिए।
थापाले बाबुरामले प्रधानमन्त्री सच्चिनु, सुध्रिनुपर्ने भनेर टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसको जवाफमा यस्तो बोलेर उनले ‘नग्न दासता प्रदर्शन’ गरेको जवाफ दिएका थिए। थापाले फेसबुकमा बाबुरामको नाममा लेखेका छन्, ‘हिजो ४० सूत्रीय माग पेश गर्दा नक्कली राष्ट्रवादी भइ टोपलेका ‘फण्डिङ पिएचडी’ले यति नग्न दासता प्रदर्शन र दलाली त नगरे हुन्थ्यो नि।’
यति मात्रै होइन उनी बाबुरामाथि बारम्बार खनिन्छन्।
थापाले केही समयअघि प्रधानमन्त्री भइसकेको सम्मानित व्यक्ति हो कि गाली शिरोमणि ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। थापाले डा. भट्टराईले विगत तीन बर्षसम्म अर्थमन्त्री हुँदा डा. युवराज खतिवडाका राम्रा कामको पक्षपोषण नगरेको र अहिले उनी जिम्मेवारीबाट विदाई हुँदा गोहीका आँसु झारेजस्तो गर्नु र रूवाबासीको नक्कली नाटक प्रदर्शन गर्नु ? भन्दै प्रश्न गरे।
यस्ता दर्जनौं विषयमा उनले बाबुरामप्रति टिप्पणी गरेका छन्। उनी पूर्व माओवादीप्रति किन यति खरो रुपमा उत्रिन्छन् त्यो उनैले जानुन्।
थापा पूर्व माओवादीका नेताहरुप्रति यति खरो रुपममा विरोधममा उत्रिन्छन्। तर उनै थापाले २०७६ मा ‘कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ समेत पाए।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले कृष्णसेन स्मृति दिवसमा थापालाई ५० हजार रुपैयाँ राशीको पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए। इच्छुकले जनयुद्धको क्रममा ज्यान गुमाएका थिए।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहिबार, असोज १, २०७७ १९:०५:२८